IINGCAMANGO EZINGAMA-51 ZETATTOO ZEGUN- [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELWA] - UHLOBO
Iingcamango ezingama-51 zeTattoo zeGun- [2021 Isikhokelo sokuphefumlelwa]
Xa kufikwa kukhuseleko lomntu kunye nokuzikhusela, unokuqinisekisa ukuba zombini uphethe umpu ezandleni zakho. Ukusuka kumjikelo ukuya kwimipu, ii-AK47s kunye nemipu yeediliya, nganye inesitayile esahlukileyo kodwa zonke zisebenza ngenjongo enye.
Thatha uhambo ubuyele kwi-AD 1000 kwaye uya kufumanisa itekhnoloji yokuqala yompu ephuma e-China.
Njengesixhobo esilula, sasinombhobho woqalo ongatshiyo kunye nompu wokuqhubela phambili ngomkhonto phambili.
Ngethuba lexesha, indima yompu kwihlabathi loluntu iya kuguqukela ekudubuleni ukuzingela, ukuzonwabisa, imicimbi yezemidlalo, imfazwe kunye neenjongo zokukhusela.
Nangona kunjalo, xa kuziwa kwintsingiselo kunye nophawu lwemipu, uninzi luyayidibanisa nenkululeko. Abanye, ngokufuthi ngenxa yokungazi okanye uloyiko, bakholelwa ukuba bobubi kwindalo. Nokuba kunjalo, akukho nto iyiphikayo imbali esebenzayo yemipu kuyo yonke imbali yexesha njengesixhobo esiluncedo.
Ngoku, xa kufikwa kuyilo lwe tattoo, imipu ingabonisa intshaba ebenzakalise kakhulu. Ukungathethi, iinkumbulo zexesha lemfazwe okanye inkonzo yasemkhosini nayo. Ukanti, intsingiselo ayisoloko imele ukuba mbi njengoko ukuqonda kwemipu kuhlala kunjalo. Banokuthi endaweni yoko babonakalise uluvo lokuba nesibindi okanye amaxesha okomelela koloyiko. Nokuba yinto elula njengembumbulu inye inokusebenza njengesikhumbuzo esihle sokuba sinikwe ubomi obubodwa.
Nokuba uthabathe ntoni na, usengayixabisa imizobo emihle kunye noyilo lwezi tattoo zingaphezulu zingama-50 zibalaseleyo zamadoda. Ukusuka kwimipu yoomatshini ukuya kwimipu, imipu kunye nokunye, fumana inani elingenasiphelo leerandi ezilayishwe imibono epholileyo.
1. IiTattoos zeSikolo esiDala
Iindidi zemipu ayinakuphela: uyilo olutsha kunye neengcinga zihlala ziveliswa kwaye zibetha imarike. Ngaphandle kwale nto intsha, kukho isibheno esithile kwiintsika zentsimbi kunye nompu omnyama wexesha elidlulileyo.
Ezi zixhobo zenziwe ngesitayile zivusa imifanekiso yeemfazwe zepirate kunyeswashbucklingukudubulakwaye nguwebacule iindlela ezahlukeneyo kwiindlela ezahlukeneyo, ezi tattoos zicocekileyo zibonelela ngomnqamlezo olungileyo woyilo kunye nemipu yakudala yesikolo njengokugxila kwabo.
2. IiTattoos zoMkhosi woMkhosi
Kulabo baunayokhonzademkhosini, imipu ifumana intsingiselo entsha nenamandla. Ekulweni, umpu wakho unxibelelene ngqo nokusinda kwakho, ke ulwalamano olunamajoni ngezixhobo luya ngaphayaukusela iibhiya kunyeukudubula kuluhlu ngeempelaveki. Uninzi lwabantu abakhonzayo bakhetha ukufaka imipu kwiitattoo ezikhumbula ixesha labo kumlo.Ezi ziqwenga zithatha mnyama nengwevu approach kunyeezinyefaka amathambo amdaka ukugxininisa into yokuba: Imfazwe sisihogo.
3. IiTattoos zoMkhosi weSilwanyana esiXhobileyo
Abanye abantu banakoisetyenziswe njengeprops yokwenzaiziphumo ezahlukeneyo. Ukunika isilwanyana a UTommy umpu kunye nentetho enomsindo yindlela entle yokuvelisaUkubunjwa kwe-absurdist.Ukunika inja umpu kunokwenza itattoo enokuthi isebenze njengobungqina bexesha lomntu oyinxibileyo njengepolisa laseK9. Sebenzisa iindlela ezahlukeneyo kunye neendlela ezahlukeneyo, ezi tattoos zezilwanyana ezixhobileyo zibonisa iindlela ezahlukeneyo ezinokusetyenziswa ngempumelelo kwimipu.
4. IiTattoos zohlaziyo
IkholamutUmenzi woxolo, ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yezona mpu zinempembelelo kwimbali yanamhlanje. Kukho intetho ethi uThixo wadala umntu, kodwa uSamuel Colt ubenza balingane. Yaziwa ngokuba sisilinganisi tyakheUkuqhekeka komhlabaIsixhoboInkqubo ivumele indoda ukuba idubule kathathu ngaphandle kokuma iphinde ilayishe kwayengokukodwaukulwa okuguqulweyo. Ezi ziqwenga zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo kunye neendlela kodwa zonke zibonisa ukuba ezi zixhobo zibukeka zintle kangakanani kwiitattoos.
wavuka kunye neepalali eziwa umvambo
5. Iitattoos zaseMelika zaseMelika kunye neNeo
Iphawuleka ngemigca engqindilili kunye nemibala ethandekayo, eyaseMelika kunye Neo-yemveli Izitayile zilungele ngokugqibeleleyo kwezi zoyilo ziphefumlelweyo.Ukusukaezimeleyoimifanekiso eqaqambileyo yemipu esarhiweyo kunye nemipu, kuyilo olukhulu olubandakanya izinto ezahlukeneyo kunye nokwenziwa kwesitayile, ezi ziqwenga ziyimizekelo emihle yokuba imipu ingafakwa njani ngempumelelo kwezi zitayile zeklasikhi.
6. IiSattoos zoMbane eziZenzekelayo
rose tattoo emnyama namhlophe
Imipu ihambe indlela ende ukusuka kwimbumbulu enye, imipu yokulayisha imisipha yenkulungwane ephelileyo.Ngapha koko, ezinye zezona zinto zintsha zenziwe ngoqeqesho lokuphuhliswa kwezixhobo.
Omnye umpu ofumene indawo entliziyweni yamajoni aseMelika yi-Colt M1911 umpu ozenzekelayo.Isebenze njengombandela oqhelekileyo wecala kumkhosi oxhobileyo wase-US ngaphezulu kweminyaka engama-70 kwaye wayiqhuba kakuhle imikhosi yethu. Enkosi kuyokukhanyaigama kunye nokubonakala ngokulula, esi sixhobo sodumo lulongezo olugqibeleleyo kwiitattoos.
7. Iitattoo zemipu ezibandakanya iiPin Up Girls
Phakamisa amantombazana zezinye zezinto ezithandwayo zoyilo kwiitattoo kwaye xa zidityaniswa nemipu, kunzima ukuyiphosa.Isuka eabahlekisiye IiChicano tattoos , kwiifemme fatales ngqo ngaphandle kwefilimu noire, ezi tattoos zibonisa ukuba zihamba njani kakuhle iintombazana kunye nemipu.
8. Iimpawu ezimnyama kunye neGrey
Ndiyabulela kumandla ayo okwenza izigcawu ezinomtsalane ngokuqonda okuqhelekileyo abantu abaninzikhethaukusebenzisa i-inki emnyama nengwevu ukufaka ii-tattoos zabo zemipu ezizodwa.Sebenzisa ukufiphaza okugudileyo kunyeukuyaubuqili obufihlakeleyo beethoni, la magcisa anetalente ayakwazi ukwenza uyilo olothusayo olunomtsalane kwinqanaba leenkcukacha eziphunyeziweyo.Ukusuka kumahlumelo kunye neebhanti zasebukhosini ukuya kwi-esile elibi uqobo, iPunisher, ezi tattoos ziyimizekelo emihle yendlela emnyama nengwevu enokusetyenziselwa ngayo ukwenza enyezohloboIitattoos.
9. I-Abstract kunye ne-3D Gun enxulumene neeTattoos
Umkhwa okhulayo kwilizwe le tattoo usebenzisa ubuqili obuqili kunyeubuchule bokunika iitattoosumbono wokuba nemilinganiselo emithathu.Omnye woku kuphumeleleved, kunyeiyasetyenziswakwezi uyilo zibalaseleyo zemipu ephefumlelweyo,kukusetyenziswa kombono onyanzelekileyo.Obu buchule-xa busetyenziswe ngempumelelo-bunika iziqwenga umphumo wobunzuluiyahambakwi tattoo.
Ngelixa abanye abantu bekhetha isiphumo se-hyper-enokwenyani enokwenziwa ngezi ndlela, abanye abantu bakhetha uyilo olubonisa ngakumbi oluthatha i abstract indlela.Enkosi kwaba bazobi banetalente, zombini ezi zahlukileyoizimboziboniswe ngokupheleleyo kwezi tatto ezikhethekileyo kunye nokubamba amehlo.
Zifanekisela ntoni iitattoo zemipu?
Imipu zizixhobo ezinamandla ezinokusetyenziswa ngeenjongo ezilungileyo okanye ezimbi. Kwabo kunyanzeliso lomthetho nakwezomkhosi, imipu luphawu lwegunya, inkululeko kunye namandla. Kwizaphuli mthetho,imipu ifanekisela iinjongo ezifanayo, nangona kungene ilensi eqhekekileyo.Inyani yile yokuba umpu ulungile okanye ukhohlakele njengendoda etsala i-trigger.
Oku kuziphatha okuhle kubenza babenomdla kuyilo lweetattoos ezinokubamba ezahlukeneyoeyahlukileyoiintsingiselo. Ukusetyenziswa okuxhaphakileyo kwemipu kwiitattoo sisikhumbuzoukuyaixesha lamagqala ekulweni.Iitattoo ezalandelayo eziqhelekileyo zemipu zimele uthando lomphathi lokuqokelela nokudubula kwezi zixhobo kunye nomtsalane obonakalayo wemipu. Kwabaninzi, imipu injaloibonwa njengemisebenzi yobugcisa boomatshini kunyezonke iziqwenga zisebenza kunye ngemvisiswano ukuvelisa thKwayeisiphumo esinqwenelekayo.
Nokuba yeyiphi intsingiselo emva kwezi tatto, umpuareumdlauyiloelement kunyeyenzaI tattoo yeesile embisUmbonisooff umbulelo womnikazi ngezi zixhobo zibulalayo.
ukugcinwa kwesixhobo kunye nemibono yevenkile yegaraji
i-red dragon tattoo esandleni
epholileyo yendlu yegumbi lokuhlala izimvo
ukakayi nge-mask mask tattoo